Dzidzo Technology iri kuchinja sei neNguva - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
EdTech, tekinoroji mune dzidzo, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Dzidzo Technology iri kuchinja sei neNguva
Sangano redzidzo rinowanzo gadzikiswa pamusoro pesirabhasi inodzokororwa, yechinyakare yechikoro, uye kusimba kwezvivakwa. Asi kudivi rakanaka, isu tangotanga kuongorora kugona kwehunyanzvi.
Nematanho ari kukura ruzivo rweRuzivo rwacho rwapinda nechikamu chikuru chehupenyu hwedu chinogona kusungirwa kuwedzera ramangwana redzidzo. Nekudaro, chikamu chedzidzo ndicho chinononoka kugamuchira shanduko uye kukurudzira kubva mukuvandudzika kwetekinoroji asi zvakadaro mamwe matekinoroji anoshamisa ari kupa kusundira kwakakodzera kuchikamu.
Technologies iri kuzviita sei?
Nekuuya kwemichina mitsva senge chakagadzirwa Intelligence, Machine pakudzidza, dzidzo yechinyakare inosungirwa kushanduka mumakumi emakore ari kuuya. Kuti ikubatsire iwe uve neenzwisiso yepedyo yekuti matekinoroji ari kuita nzira yavo nemazvo, heino runyorwa rwezvigadzirwa zvetekinoroji zviri kusimbisa mutambo wavo kana zvasvika kune tekinoroji yedzidzo.
Icho chiri chaizvo fananidzo yehungwaru hwevanhu maitiro kuburikidza nemachina. Iyo inoteedzera zviito zvevanhu uye kufunga kwepfungwa kugadzirisa chaiko-matambudziko epasirese.
AI mune dzidzo asi inonyanya kushandiswa se Akangwara Adaptive Kudzidza Injini iyo inoda zvimwe zvakasarudzika AI matekiniki, akagadzirirwa kune chaiwo zvido zvemushandisi. Dzidzo huru yeIntelligent Adaptive Engines inosanganisira mifananidzo uye nyaya dzekudyidzana idzo dzinogona kunyatsoenderana nevadzidzi.
Mumwe weakanaka muenzaniso weAdaptive yekudzidza injini ndeye Dreambox, chikuva chepamhepo chinotarisana nesvomhu yechikoro chepuraimari uye chepamusoro chikoro. Inojekesa zvakajeka kune hunyanzvi hwemwana uye inoita kuti mudzidzi adzidze padanho rakakodzera zvakanyanya kune zvavanoda.
2.Kuwedzera Kwechokwadi (AR):
Augmented Reality ndiko kusangana kwemadhijitari ruzivo nemamiriro emushandisi munguva chaiyo. Icho hachisi chinhu asi tekinoroji inoshandisa iyo iripo mushandisi nharaunda uye inoputira ruzivo rutsva pamusoro.
Kusanganisira AR mune dzidzo kwaizouya sekubatsira kune vese vadzidzi pamwe nevadzidzisi. Vadzidzisi vanogona kunanga zvakananga vadzidzi mune inopindirana 3D modhi inotungamira kubata pfungwa yevadzidzi uye kuvakurudzira. Kunyanya maitiro acho anova anonzwisisika, ari nyore, anoshanda uye anobatsira mudzidzi kuti anzwisise chidzidzo zvakadzama. Uye zvakare, maficha eAR anovabatsira kudzidza chaiko uye anovabvumidza kuti vadzidzise nezvakazara zvemadhijitari zvemukati kana mamwe emhando dze3D senge ane zvikamu chaizvo.
Zvinhu 4D ndeimwe yakadaro yakakura chikuva chevadzidzi. Inowanikwa kune vese Android neIOS iyi application inotsigira vadzidzi kuti vaongorore minda yemakemikari nekutendera kubatanidza zvinhu zvakasiyana kuti vaone maitiro avanoita kuchokwadi.
Imwe chikuva chakakurumbira chinogadzira kubatanidzwa mukirasi kuburikidza Kuwedzera kwechokwadi is Aug Izvo! Inonyanya kunangana nevadzidzi vane kurudziro yakaderera uye kubatsira vadzidzisi kuti vavabatanidze mumunda we Augmented reality sainzi dzidzo.
Uyewo Verenga: Kuwedzeredzwa kwechokwadi kunoratidza sei chishandiso chinoshanda muDzidzo.
3. Virtual Reality (VR):
Virtual Reality yakabatana zvakanyanya neAR kana zvasvika pakupa zvakapfuma zviitiko zvekudyidzana asi zvakasiyana neAA nharaunda yacho ndeyekunyepedzera.
Virtual Reality kana ukashanda zvine mutsindo muchikamu chedzidzo inogona kuuya nemhedzisiro inokatyamadza uye kubatsira kusimudzira kubatanidzwa uye kuchengetedza ruzivo rwevadzidzi veese mazera emakore.
Imwe yedzidzo dzakadai dzisinganzwisisike dzakavakirwa pachikuva dzinoita VR zvakanaka ndizvo KirasiVR. Inopa a rakapotsa chokwadi system yakanyatsogadzirirwa makirasi. Kubva pakupa kirasi-yakagadzirira yakamira VR mahedhifoni kuenda kukharikhulamu yakaenderana zvemukati, inozviita zvese. Iyo inouyawo neyakare-nguva yekugovera kirasi chikuva uye kuwana mudzidzisi kuronga zvidzidzo. Inotopa kutonga kwakazara kweakawanda mahedhifoni mukirasi inobvumira vadzidzisi kutumira zvidzidzo nekukurumidza uye kutarisa kufambira mberi kwemudzidzi wega.
Unoda kuwana mamwe manzwisisiro pa Virtual Reality? Wobva wabata kopi yako yemahara ipo pano.
4. Kudzidza kwemuchina:
Chidimbu che chakagadzirwa Intelligence, Machine Learning zvinonyanya kubatsira kutsvaga mapatani mune akaunganidzwa data uye kushandisa algorithms kuita dhata-inotyairwa sarudzo.
Imwe yekutanga kunyorera kweMuchina kudzidza mune dzidzo yakanga ichitsiva kuzadza zvirevo nemibvunzo yakawanda yesarudzo. Neshanduko iri kugamuchirwa zvakatsiga mumidziyo mitsva yekudzidzisa.
Muenzaniso we machine learning inogona kuve yakakurumbira chikuva, Yakavhurwa. Iyo inowanzo iri online catalog yezvikamu zvekudzidzisa, mabasa epamba, mitambo, uye mavhidhiyo. Iyo inobvumidza vadzidzisi kugovera zviwanikwa kuvadzidzi pamhepo, vachirega vadzidzi vachiita homuweki, migove uye kutora ongororo pane avo vamene michina. Inoisawo zviwanikwa zvekudzidza pahwaro hwezvinangwa zvekudzidza zvemushandisi wekupedzisira.
Zvimwe kubva kuTech giants:
Hazvirevi kuti madiki madiki ari kuchera muDzidzo Tech asi mamwe makuru makuru akadai seGoogle, Apple, uye. Microsoft kuisa mari zvakanyanya muzvigadzirwa zvinoenderana nedzidzo.
An Initiative naApple. Inc
Apple iri kuuya neset yakakosha seturu yekushandisa kutungamira vadzidzi pane maapplication nemidziyo yekirasi. Mamwe acho akataurwa pazasi:
Iyo yekudzidzira app: Mudzidzisi wekudzidzisa uyo anoita kuti mudzidzisi ave iye anotarisira yega yega iPad irimo mukirasi uye nokudaro kuwana mukana wevadzidzi vese varipo mukirasi.
Basa rechikoro: An app iyo inoita kuti mudzidzisi vashande pamwe nevadzidzi munguva chaiyo. Iko iko iko kuri nani kushandisa kwePadad uko mudzidzisi anogona kugovera migove, mapepa ekushandira uye kutevera vadzidzi kufambira mberi.
Zvinyorwa: Handouts inzira inochinjika yekugovana zvinyorwa, pdf, mawebhu-zvinongedzo, uye mapepa ekushandira pane vadzidzi vako.
Google kunyange ine zvigadzirwa pamwe chete nemitsetse yakafanana. Google kirasi, semuenzaniso, inowedzeredza mabasa, inokurudzira kubatana kwekuita kudzidzisa kuve nechinangwa uye kuve nekubudirira.
Google inopa kunyange nyore kubatana pamwe neyayo GSuite kana zvasvika kune Dzidzo.
Microsoft haina kana kusarira kumashure. Product yavo, Microsoft Mutauro Wemushanduri batsira kuputsa zvipingaidzo zvemitauro. Izvo zvinotopa kune vadzidzi vanoda Inobatsira tekinoroji uye vanotambura nekutadza kunzwa.
Kutaura nezve ramangwana, isu tinogona kutarisira kuti makamuri ekudzidzira kuti atore chiyero chimwe kusvika chimwe pakati pevadzidzi nemidziyo. Nemidziyo yakaita Google's Chromebook izvo zvakadhura zvakachipa, zviri nyore kubata uye kuchinjika uye zvinopa mukana kune akati wandei eGoogle mapuratifomu edzidzo, chikamu chedzidzo chinogona kuwana kukurudzira. Zvirokwazvo, neakawanda matekinoroji ari kuuya kumberi kuti ape kugona kwavo, pachave nekuwedzera kukurudzira kuti vadzidzi vatore humwe muridzi uye vabatanidzwe munzira yavanodzidza.
Une chirongwa mupfungwa? Wobva watambanudzira kwatiri kubvunza.
6 Akanakisa Zvimiro zveiyo Inopindirana Whiteboards
Jul 22 | EdTech, tekinoroji mune dzidzo